Iingxaki ngelayisenisi ye-ArcGIS - i-Geofumed
NgoDisemba, 2007 ArcGIS-ESRI
Ngokuqhelekileyo ukusetyenziswa kwelayisenisi ye-ArcGIS yintloko, okanye emva kokuba isetyenzisiwe ikhutshwe kwaye kubonakala ngathi kufuna ukuyibuyisela kwakhona ngenxa yokuba ayikwazi ukuyifunda. Le yinkqubo eqhelekileyo yokuyenza:
Ilayisenisi inokusetyenziswa ngefayili ecacileyo okanye ngeenkonzo, indlela elula yokuyenza isevisi yile:
1 Sebenzisa isixhobo sokulayisenisa
Kule nto uqala / iinkqubo / i-arcGIS / umphathi welayisenisi / amathuluzi olawulo lwelayisenisi
2. Kwifayile yefayili yefayile ukhetha ukhetho "usebenzisa iinkonzo"
3. Kuqwalaselo lweenkonzo zethebhu, fumana indawo yeefayile ze lmgrd.exe, ilayisenisi.dat, kwaye ulondoloze inketho nge "inkonzo yokulondoloza" iqhosha (Le fayili yefayili yilungiselelwe igama lelayisenisi)
4. Yenza isebenze, ngenxa yale nto uya kwi "ileyi yokuqala / yeka / yokufunda kwakhona" ileta, nqakraza kwi "Umphathi welayisenisi ye-Arcgis", ngoko "qalisa iseva". Emva kwemizuzwana embalwa kufuneka ibonakale njengeyasebenza.
Amaninzi amaninzi kulolu khetho alisebenzisi ilayisenisi, umyalezo "uqala ukuhluleka" uvela okanye emva kweenyanga ezimbalwa zokuwusebenzisa ufumana umyalezo oku kuhlambalaza:
«Hambisa umlawuli wakho welayisenisi yeseva ngolwazi olulandelayo:
Ayikwazi ukuxhuma kumncedisi, umncedisi (lmgrd) akaqalanga okwamanje, okanye engalunganga port @ host okanye ifayili yelayisenisi isetyenzisiweyo, okanye i-port okanye igama lomnxeba kwifayile yelayisenisi ishintshiwe. Isici: I-ARC / INFO, igama lomncedisi, umzila welayisenisi, iphutha le-flexim: -15,10. Iphutha leNkqubo: I-10061 winsock: uxhumano lwenqatshelwe »
Indlela elula yokuyilungisa ngu:
ikhaya / ipaneli yokulawula / izixhobo zokulawula / iinkonzo
ngoko ukhangele inkonzo ebizwa ngokuthi "umphathi welayisenisi ye-ArcGIS", ukhethe kwaye uyisebenze ngesithonjana se-«activate service», ukuba kubonakala ukuba kusebenze uyenze nge-«startart service service»
Post edlulileyo«Edlulileyo Indlela yokufunda i-Microstation (kwaye ifundise) ngendlela elula
Post Next Ukuhamba ngeenqwelo zeenqwelo-moya kuDisemba 2007Okulandelayo "
Iimpendulo ze-75 "Iingxaki ngelayisensi yeArgGIS"
Impazamo elandelayo ye-ArcMap 10.7.1 xa uyiqala, sele ndizame yonke into kodwa isabonakala kumzuzu othi «kulayishwe uxwebhu»…
Ndineengxaki nge-ArcMap 10.3, ndicinga ukuba ininzi yabo inayo inguqulelo, yintoni isisombululo esinokuthi sibe khona kwingxaki ehambayo ukuya ku-XY inketho ayibonisi, i-Regards.
jesus ramirez uthi:
Ndinengxaki yokufakelwa kwe-arcgis 9.3 indiphawula impazamo kwimpazamo yenginginya ye11001. ukhona umntu onokundinika isisombululo ndicela
Ndineengxaki zokukhipha i-10 yeMenenja yeMvume ye-Arcgis, kodwa ayivumeli. Ndizama ukwenza okuvela kwipaneli yokulawula kodwa indixelela ukuba andinagunyaziso, ndayilinga kunye neRevo Unistaller kunye neNkqubo yoMphathi weLayisense ukuyikhipha. Ngaba kukho naziphi na izimvo?
nceda wonk 'ubani ndinenkinga nge-arcgis I-10 veran Ndifuna ukwenza imephu yempempo emva kokusebenzisa indlela yokupakisha ye-IDM iphuma iphutha elifanayo kwezinye iindlela. Ndingathanda ukuba ndisebenzise i-geostatistics ndifumana umzekelo kodwa andinako ukwenza i-raster ukuba ikwazi ukwenza imephu ye-algebra
Kulungile Molweni nonke. Ngabahlobo ndinengxaki kodwa okokuqala ndithetha ukuba inguqulelo yeArcgis endiyisebenzisayo yi9.3. Ingxaki ikhona xa ndisebenzisa isixhobo kwincwadi yezixhobo ukuba ndifumana uphawu olubi kakhulu oluchaza ngokungathi kwilayisensi yam ayizange ivuswe, kodwa zixhobo ze-3d zokuhlalutya indawo kunye nezinye endizifake kamva ...
Ndiyabulela kwaye ndiyathemba impendulo
Kuya kuba kuhle kakhulu ukuba umntu uyasabela kulo, kuba kunjalo nakwam. Ukuqhekeka kwafika nelayisenisi efanayo ... kwaye andinayo isongezelelo selayisenisi! Ngaba umntu uyazi indlela yokulungisa?
Ndizama ukwenza yonke le nto besebenzele mna, nokuhlolwa nokuvavanywa ndisebenze thile xa ukhupha engenazingcingo, okt nini kwi-intanethi ngokungathi umlingo I ukulungisa le ngxaki kwaye ukuvula inkqubo ngaphandle akukho ngxaki, umbuzo wam ngoku kukuba xa kukho plugg-okanye ifayile engaqhelekanga le invandiendo khompyutha wam ???? siya kubulela
Oko bekufanele ukuba kwenziwe yinkqubo xa ufaka inkqubo. Ukuba unengxaki ngale nto, kuya kufuneka ubize umnikezeli wakho, kuba ndiyaqonda ukuba unelayisensi esemthethweni.
Ukuba oko ufunayo yilayisenisi ephosiweyo, asikwazi ukukunceda ngelanga.
Igalelo elihle kakhulu. Xa ndikhangela indawo yefayile "yelayisensi.dat", ayiveli kwaye andazi ukuba ndiyifumana phi. Oku kukuthintela ekusebenzeni i-arcgis kwakhona.
Ndiza kukuxabisa uncedo lwakho.
Ndinengxaki, undo arcgis 9.3 ngoba, xa ndisebenzisa i-arctoolbox, andikhange ndiyifumane ithuluzi lokuguqula i-raster ibe yi-polygon, endiyikhangele kwizixhobo zemenyu / izandiso, kwaye ilahlekile, bendifuna ukufaka ulwandiso, kodwa iziphathe ngokufanayo , ndiye ndagqiba kwelokuba ndikhuphe i-arcgis, kunye nelayisensi engakhange ndikwazi ukuyiveza kubathengisi, ukuba umntu udlule kule efanayo ndicela undixelele ukuba ndingayenza njani, ndifuna ukucima ifolda ye-ESRI, apho le ilayisenisi yokuqhekeza enegama i9.xlic kodwa andikwazi ukuyicima, xa ndiyicima kwiphaneli yokulawula indinika umyalezo okhawulezayo othi kwiwindows engavakaliyo; Ndiyasebenza, ndinethemba lokuba oogxa abasebenza kunye ne-arcgis bandinceda. Enkosi kunye nemibuliso kubo bonke.
URolando Obregon uthi:
Mna lo 10 ArcGIS, yonke into isebenza ngokupheleleyo ngaphandle xa kumazwe okanye geodatabases importo, kungenisa imposiso kwaye kubonisa ukuba mvume yam yokuqala, njengoko na ukusombulula le ngxaki, hayi ukuba umntu ityhubhu le ngxaki kunye ndanyula.
Diego Quispe uthi:
Ndineengxaki ngexesha lokuba ngumphathi welayisenisi yomlawuli, ukuvula iseva yam Ndifumana umyalezo wephutha: ikhompyutha oyikhethile ayikho iseva yelayisenisi evumelekileyo okanye isebenza ngenguqu yangaphambili yomphathi welayisenisi, Ndifuna ukukhokela kule nkalo
Ndiyabulela eli galelo elikhulu. Ndifuna ukuba wazi ukuba loo mizila elula isombulule intloko
Ndinelayisenisi evumelekileyo ye-arcgis kunye nezandiso zayo kwaye ngokusemgangathweni ndiyenzile yonke into ekufuneka iyenzelwe ukufakela kwayo kodwa ngexesha lokuvula i-arcmap kwaye ndiyinike izixhobo kunye nezandiso andiboni. umntu unokuncedisa, nceda ulungise ingxaki yam
Yeyiphi impazamo ekuphosayo ngokuthambeka? Kwaye wenza ntoni ukusombulula?
Sawubona, kukuhlwa, okokuqala kukubonga ngomsebenzi kweli khasi kuba lihle kakhulu.
Ndinengxaki yeArcgis 10. Kwaye ndingalunganga ngesixhobo se-TO TO XY. Ndifaka i-servi pack ukuze ilungiswe kwaye ezinye izixhobo zebhokisi yeArctool, njengethambeka, iyeke ukusebenza ngoko nangoko. Ukuba ndilungisa impazamo ethi "ithambeka", Yiya XY uyeke ukusebenza.
Ukuba umntu unokunceda, nceda, kufuneka ndiyenze imisebenzi eminyuvesi kwaye andinakusebenza.
Ewe, andazi ukuba kwenzeke ntoni. Ukuba ufakelo lwakho lusemthethweni, nxibelelana nenkxaso ye-ESRI kwilizwe lakho.
Akukho nto, ayikaqali. Ndiyibuyisele kabini kwaye inika ingxaki efanayo ...
Ndiza kuzama ukuphawula ngento eyenzekayo.
Kuyinto engaqhelekanga, kwakhona, kuba i-ArcGis ifayile ikhompyutha iyabazi ukuba ivule nge-ArcMap, kodwa ngokuchofoza kabini inkqubo ayivuli.
Le mpazamo efana neyathethwa ngumntu kwiforam ye-cartesia: http://www.cartesia.org/foro/viewtopic.php?t=12778
Kodwa, kulo mzekelo, andisisebenzisi umshini obonakalayo, kodwa iPC elula.
Ke ngokuqinisekileyo ufakelo lonakalisiwe. Kuya kufuneka uphinde ufake.
Ndibhekisela kwifestile yokuqala apho ezininzi iinkqubo zinokuzivula xa uvula i-interface.
Umphathi welayisenisi wandinika zonke iilayisenisi, kwaye kubonakala ukuba konke kulungile.
Kufana nje ngokuba inkqubo ayizange ivule.
Incwadana ibhalwe kwibhokisi yomkhiqizo.
Andiyi kuqonda xa uthetha ukuba iifestile ebonakalayo ivula.
Kuya kufuneka ukuba ubone ukuba yeyiphi i-extensions osebenzayo kwilayisenisi yakho.
Ndinenkinga ngeArgGis 9.2. Ndiyifake ngokuchanekileyo, umphathi welayisenisi uthi nento yonke kodwa ndiqala ukuvula nayiphi na inkqubo yayo, njenge-ArcMap, kwaye ndivula kuphela iwindi xa iprogram ivula: ukuyila, inguqulelo, njl njl. . Kwaye akukho nto ivula. Akundiphi na uhlobo lwephutha. Yintoni enokuba nayo? Sebenzisa iWindows XP, ngolwazi olungakumbi.
Makhe sibone ukuba umntu unokundinika isisombululo, siyabonga kwangaphambili ..
nceda ndifuna ukufaka izandiso endizidinga uncedo nceda ndithumelele inkumbulo yokubonga ............ ..
Ndiyafaka i-ArcGis kwaye ndiyinto engacamanga kule nto ... Kukho iphutha eliza ngalo lonke ixesha, ndicinga ukuba libuqili kodwa andinakuyidlula.
Andazi ukuba bayibeka njani okanye apho kufuneka nditshintshe "i-pan-yokulayisha" yegama lePC yam ... Ngaba uyazi ukuba yenziwa njani? ENKOSI
Isici: ARC / INFO
Igama lomamkeli: ukuphinda ulayishe kwakhona
Indlela yelayisensi: C: \_ Iifayile zeNkqubo \_ ESRI \_ License \_ arcgis9x \_ ArcGIS9.lic;
Impazamo yeLayisenisi ye-FLEXnet: -96,7. Impazamo yenkqubo: 11004 «WinSock: Igama elisebenzayo, kodwa akukho rekhodi (NO_ADDRESS)»
Ndicinga ukuba into efanelekileyo kukuqhagamshelana nomboneleli wakho wase-ESRI, kuba ukuba uthenge ilayisenisi yomthetho akufanele ube neengxaki.
nceda ndifuna uncedo lwe-arcgis i-9.2 yasebenza kum ngexesha elidlulileyo ngoku ukuba ndiyivule kwakhona ininika impazamo yelayisenisi, ndilandele onke amanyathelo kodwa ayisebenzi kum, nceda uncede ndincede
Ndiyifumana le nto kuba ndifuna ukwazi ukubonelela ngomlawuli weseva yelayisensi yakho ngolu lwazi lulandelayo:
Umshini womncedisi welayisense okanye ungaphenduli.
Bona umlawuli wenkqubo malunga nokuqala inkqubo yeseshoni yelayisenisi, okanye
Qinisekisa ukuba ubhekisela kumphathi ofanelekileyo (jonga uLM_LICENSE_FILE).
Igama lomqhubi: Hayi_Set
Indlela yoLwazi: © Not_Set;
I-FLEXnet ilayisensi ye-erron-96,7. Impazamo yenkqubo: 11004 «WinSock: Qinisekisa kum, kodwa hayi
irekhodi (NO.ADDRESS) »
Kunene, ukuba unokwenza kuphela ngomsebenzisi womlawuli.
Sawubona, ndinenxaki yokuba igama lelayisenisi ayitshintshi kulawulo, ndilayishe iifayile kodwa indixelela ukuba ndifuna imvume yomlawuli. mbulela
Ewe, ngokubonakalayo ikhonkco lelayisensi lalahlekile. Mhlawumbi ufake inkqubo ecoca irejista, kwaye ukuba akukho semthethweni, yafika apho.
Ezi zinto, ngeenjongo zobungcali, kungcono ukuthenga ngokomthetho okanye ukusebenzisa ezinye iinkqubo ezingabizi ngaphantsi.
Ngokufanelekileyo, kufuneka uqhagamshelane neenkampani ezithengisa ilayisenisi.
resuilta ukufaka i 9.3 ArcGIS yonke ashiye kodwa xa ndisiya Inio / iinkqubo / ArcGIS / desktoplicence njalo .. kwambatha umphathi-mvume, ingeniso igama computer, kwaye ndifumana impazamo malunga mvume omdala into efana . Ndiya kwilayisenisi ye-compuruebo kwaye igama lichanekile. Ndidinga uncedo olungxamisekileyo kuba mna ophetheyo projekthi kunye namakhwenkwe 2 bamele loo mba Ndabaleka ... by faaaaaaaaaaa
Sawubona umhlobo wangaphambili unombulelo ngokuxhasa.
Umatshini wam unayo i-7 iwindow, kwaye ndine-arcgis i-9.3 isebenza kude ndibe ndingenako ukungena kunye nomyalezo ohlambalazayo.
Ndilandele amanyathelo akho kodwa ndinengxaki xa ndigcina ukhetho nge "Gcina inkonzo" .. Ibonisa ukuba utshintsho lwe-FLEXIm yelayisensi ye-FLEXIm aluphumelelanga, kuba kufuneka ndingumphathi ndenze lo msebenzi, njengoko ndenzayo ukuzalisekisa eli nyathelo, kuba Ndisawufumana umyalezo lo wokunyelisa.
Kwenzeka ntoni kukuba kungenzeka ukuba ubeneelayisensi engekho mthethweni ifakiwe. Xa ufaka ipakethi yeNkonzo ye1, irejista yahlanjwa, yiyo loo nto ekucela ukuba uthenge ilayisensi.
Andikwazi ukukunceda kule nto, kuba imigaqo-nkqubo yethu isithintela ekukhuthazeni izenzo eziphula amalungelo amalungelo epropati.
molo ukuba ungandinceda ukufaka i-arcgis 10 ukufaka yonke into ngokuchanekileyo kodwa umsebenzi webhokisi ye-arctolol / ulawulo lwedatha kunye nesixhobo sokuhlalutya okomhlaba awuchazi mpazamo isithi esi sixhobo asinamalayisense; Xa ufaka ipakethi yenkonzo ye1, inkqubo iyekile ukusebenza, nceda undincede ndinale ngxaki ixesha elide
uncedo ukuba unokunceda ndifake i-arcgis 10 faka yonke into ngokuchanekileyo kodwa umsebenzi webhokisi ye-arctolol / ulawulo lweedatha kunye nesixhobo sokuhlalutya indawo asikhankanyi impazamo esithi le sixhobo ayinayo ilayisenisi; xa ufaka i-1 isevisi yokupakisha inkqubo yayeka ukusebenza
Kwiimeko ezininzi, xa ufaka iseva yelayisenisi ihlala kwi-88%, kwaye ayenzeki apho.
Kufuneka ukhangele ukuba usebenza kunye nemvume yomlawuli.
Oku kungenayo ilayisenisi yedwa, uthenge izandiso ezifanelekileyo.
Molo, uyolo olulungileyo, uyazi, kwi-ArcGis 9.3 yam andiziboni iiarctools, phakathi kwazo, isixhobo sokuguqula ... endisifunayo ngoku ... kakuhle ukuba unokundinceda, ndingavuya ngokungapheliyo. Enkosi kakhulu ngokufanayo.
Ewe, ithenge. Oko kuhlawulwa ngokwahlukeneyo.
Jairo B uthi:
Sawubona ndinenxaki yokuba ilayisenisi ithi andinayo ilayisenisi eyimfuneko yokusebenzisa ithuluzi lokuhlaziya i-geostatistical engayenzayo?
Ingxaki kukuba ukubona ulwazi olugcinwe iiprojekthi, ngokucacileyo imilo ebonakalayo, kufuneka ukuba kwifolda apho iprojekthi idibanise nayo. Oko kuthetha ukuba ukuba imilo yakho ikhona kwi C: \_ Practice, loo folda kufuneka ibe khona. Ukuba kunjalo, kunokwenzeka ukuba iifayile zemilo zonakaliswe ngexesha lokubuyiselwa.
Enye inketho kukukhawulela ngokuchanekileyo kwisihloko ngasinye kwitafile yezinto eziqulekileyo kwaye uye kwi-Data option / Repair Data option ... Ukhetho lokufumana umlo luvela kwifolda apho okwamanje lukhona.
Kwakhona iiprojekthi (* .mxd) zinokuqwalaselwa ngexesha lokuzisindisa, ukwenzela ukuba inkqubo ibheke imilo ngokuzimela ngaphandle kwedisk apho ikhona khona, nje ngokuba indlela iyafana.
ookumkani bama-kevin uthi:
molo ndifuna ukwenza umbuzo ndenze iimaphu ezithile nge-9.3 arcgis kodwa ngelishwa umatshini wawonakalisiwe ndibuyise iifayile ndafaka i-arcgis komnye umshini kodwa ngela xesha lokuvula iifayile komnye umshini ndalayisha ifayile kodwa andinakukwenza uhlengahlengiso kuba ndifumana imiqondiso yokuvuma eyenza ii-icons zibonakale ngathi azisebenzi njengoko ndinokuzivula.
Ndiyabonga kakhulu, ukuba kusebenza kwaye andisayi kubona iifestile zeengxaki kunye nelayisensi xa uqala i-arcgis 😉
Siyakuvuyisela iphepha lakho lihle kakhulu.
Ndinayo i ArcGIS 8.0 I efakwe kwi PC ne Windows 7 evela 32 bit, ndizama ukulayisha izixhobo, kodwa nganye khetha Yenza I ibaluleke progam kunye umyalezo ndisithi ArcMap sele uyekile abasebenza, ndandisele ngaphambili efakwe kwi Windows XP kwaye yayisebenza ngaphandle kwengxaki
Ndineengxaki efanayo nabantu abaninzi abanephutha le-15,570, ethi umphathi welayisenisi akakwazi ukuxhuma.
Ewe, ingxaki ivela kwi-windows firewall, uyayicima loo nkqubo, uqala kwakhona kwaye iyaqala ukusebenza. Ndiyifake kwi-Windows 7 kwaye ndiya kufezeka.
hOLA g! Uthi, Ndiyabulela ngoncedo lwenu, ngokuqinisekileyo sele ndisebenzise zonke iintlobo zefomula, phakathi kwabanye oye wakuthethayo, ngaphandle kweziphumo, ndicinga ukuba kulungile ukuba uqale ukusebenza kunye nesig.
Ukubulisa kunye nemibulelo emininzi
Ndicinga ukuba uJhunior noTeresa bathetha ngohlobo lweArcGIS 9. Ukuba kunjalo, eyona nto isebenzayo kukutsalela umnxibelelanisi wakho othengise isoftware, kuba kwinto abayihlawuleyo kufuneka ubanike inkxaso.
Ukuba uthetha ngenguqu engekho mthethweni ... mmm nzima, imigaqo yale blogi ayivumeli ukuxhasa ezi zinto.
Umyalelo ochanekileyo weli lilapha:
-Nceda umphathi welayisenisi
- Qala iseva yelayisenisi.
Inqanaba lesibini kukuba andinakukuxhasa, kuba kufuneka ube une-.dat okanye .lic ifayile eyandisiweyo apho amaphepha-mvume oyithengileyo (okanye oyifumene apho) ebhalisiweyo. Kwindawo oyikhuphele yona inkohliso, kufanele ukuba ukhuphele imiyalelo yokukuxelela inyathelo ngenyathelo indlela yokwenza, kuba zombini i-xp kunye neVista, yahlukile.
Molo, kuhle ukufunda eli phepha kwaye ufumane ithemba. Emva kwexesha elide ndisebenza ne-arcGIS ndigqibe kwelokuba ndifake ezinye ezihlaziyiweyo ndithetha i-9.2 okanye i-9.3 kodwa akukho ndlela, ndizamile nokufaka eyakudala kwakhona kodwa ngaphandle kweziphumo, ndizamile ezininzi ndinokuqokelela iimpazamo ezoyikisayo. Impazamo yokuqala endiyifumene emva kokuzama ukufaka i-9.2 kukuba "I-LM inkqubo ibone ingxaki kwaye kufuneka ivale", enye yeempazamo eziqhelekileyo yile evelayo "iidizayini zeseva" zithi ifayile yelayisensi ivela kwi-Autodesk Imephu 2004 kwaye kanye njengokuba ubona yonke repertoire yeengxaki; Ndiyaqonda ukuba ukwenzeka kwelayisensi, ungandinika ikhebula?, Ndinomdla othile.
Molweni, ninjani nina? Ndinengxaki nge-Ardis 9.2, ibisebenza kakuhle kodwa andazi ukuba kwenzeka ntoni kuba andifundanga i-ARC MAP xa ndifuna ukuyivula, akukho nto iphumayo kwaye ndiyayazi into endiyenzileyo ayivuleki kodwa xa nditshitshisa ilayisensi andikwazi ukuyenza, andazi ukuba ndenze ntoni
Omnye undixelele ukuba esinye isizathu sokuba kutheni ingxaki, ukuba inkonzo ibonakala ilahlekile kukutshintsha inombolo ye-IP yomshini.
Ukwenza oku unokujonga kwi-lmtools, isethingi yesetyenzisi, ukuba i-IP adress ifana nomntu owanikwa kumshini.
Andikwazi ukuyiqinisekisa, kodwa ndiyishiya ukuze uyiqinisekise.
Sawubona, ndine-argis i-9.3 ehambayo, anditsho ukuba ukuba ndivula inkqubo nge-intanethi evulekile, kuya kuvimba i-argis. Ngaba kunjalo?
Le yefayile equlathe idatha yelayisensi oyithengileyo kunye nekhompyuter yakho, ihlala ivulwa xa uqala ukufaka inkqubo kwaye uyibhalisa. Ukuba awuyifumani, fumana indawo ye-ESRI ebithengise le nkqubo.
Umhlobo enkosi ngegalelo kodwa ayisebenzi .. kakuhle andiqondi ukuba iifayili .DAT kwi ndawo ithi kukho q incertarlo lincense umendo kwifayile: ... kodwa andiqondi ukukhetha .. ifayile ukususela akukho fayile .DAT kulawulo C: \_ iifayile inkqubo \_ ESRI \_ License \_ arcgis9x baqonde ukuba uphendule umbuzo wam .. ngenxa
Ukukunceda ndiza kucacisa ukuba ilayisenisi yakho iyimvelaphi okanye iyaphikiswa, kuba ingaba igama leqela lakho alihambisani naloo obhaliswe kwilayisenisi.
Molo, quiciera mna pudieces ukunceda instatle ArcView 8.01 kunye Segui uvule indicas amanyathelo kunye uphawula into ngaphandle ukuba unayo, xa ndikunye kwi Start / Stop / ileyibheli Phinda ufunde mna umele ukhethe umphathi mvume ye ArcGIS kodwa window yam ithi ESRI License Manager kwaye uqale nokucofa Sever ayivulwanga. Enye ingongoma ue ukuba ufuna ukuqala inkqubo Ndizifumana liya kukhupha mensionas yesiphoso nkqubo: 10061 WinSock: uqhagamshelo ngoko akazange avume ulandele amanyathelo kwakhona isebenze kunye negama ArcGIS lic ... alibonakali kwaye kuphela ESRI liki ... andiqondi loo nto ayifani data ukuba iisampulu zakho ngalo nendlela ezichaphazela oku, kungekhona ngoku, ukuba mna engalunganga kule nkqubo. Ndiyathemba ungenza nindincede, enkosi kakhulu kwangaphambili.
Kwi-Windows Vista, ukungena kwipaneli yenkonzo yenza oku:
Ukuqala / iqhosha le-R .. Le nto ilingana nokuQalisa ,baleka
emva koko ubhala iinkonzo.msc
Ngomnye ... andinayo ingcamango
Ikhasi lakho lihle kakhulu Siyabonga!
Ndifuna ukukubuza ngeenkcukacha ezimbini. Eyokuqala yeyokuba ndineVista kwaye ayisebenzi indlela oyinikezayo ukuze uphinde usebenzise ilayisensi. Xa ndifumana "Izixhobo zoLawulo / iiNkonzo" ayindivumeli ukuba ndingene. Ndifuna ukwazi ukuba yingxaki jikelele ukuba sinayo iVista okanye akunjalo.
Ndifuna ukukubuza ngeArcGlobe. Andikwazi ukuyenza isebenze. Ndifumana lo myalezo ulandelayo «Ukuvelisa iModyuli ye-ArCID». Kwaye kuhlala kubambekile. Kwisifundo endikhuphelileyo, kucacisiwe ukuba oku kungenxa yokuba (kwabo sinesiprosesa esingumbhalo-mbini) enye yamakhori isebenza nzima kwaye ichaza indlela yokuyilungisa. Nalu ikhonkco kwimeko ofuna ukulikhuphela:
Kodwa isisombululo asisebenzi kuVista. Ukubukela ividiyo, ucinga ukuba unokufumana isisombululo kwi-Vista?
kwaye ungayikhupha isandiso? iyonke ayixhaswa
Ndiyabulela kwaye ndiyifumene, kodwa ndiyena enye ingxaki, kuvela ukuba ukufaka izixhobo ze-archidro kubonakala ukuba ufake enye inguqulo engahambelaniyo ngoku ukuba isicelo andivumeli i-arcmap april
Jonga "ithebhu yokuqonda isifo" kwaye ujonge ukuba ngaba ilayisensi ye-3Dhlalutyo ibhalisiwe apho
Ndineengxaki engingazi ukuba unako ukunceda, xa ndizama ukusebenzisa ibar analyst ye-3D kodwa andivumeli ukuba ndixelele ukuba andinayo ilayisenisi yaloo msebenzi, sisiphi isisombululo?
Ukuba ufomati umatshini, kunokwenzeka ukuba isixhobo sinelinye igama. Unqakraza ekunene kwi-pc yam, emva koko ubone iipropathi kwaye ujonge igama elinalo kwi "igama leqela"
Igama elifanayo kufuneka libe kwifayile yelayisenisi, khangela i .lic and .dat
Kubonakala ukuba kunyaka ophelileyo ufake ngempumelelo ArcGIS 9.2 kwiinkqubo zam izahlulelo maquina.Formatee kulo nyaka kwaye ufake XP, waza wathi ukufaka ArcGIS cerciorándome kwakhona ukuba abazange realcionados iifayili ukusuka ArcGIS omdala kodwa uye le fasilithi intsha a ukusilela kuba xa Ndigidima lmtools umncedisi uvumelekile ukuba ayeke uze ukuqala rereads ilayisenisi kodwa akukho imposiso ivela njenge ifayile lmgrd.exe singaqalisi kwaye angazishiyi nam emva kokufaka ngempumelelo ArcGIS Desktop
hello ... ngokuba inyaniso balandela loo manyathelo kwaye wasebenza ngokufanelekileyo ... Ndaba ingxaki efanayo eyokuqalisa inkonzo ndisebenze, kodwa sele ngaphambili lihlaziye .lic okanye .dat igama tubiera Makina ... I ukuvuyisana abantu bam ... Grax ngegalelo ...
Ngokuya kwiscreen esibonisiweyo, iseva yelayisensi ayikenziwa yenziwe. Kuya kufuneka ujonge ukuba ngaba ilayisenisi yakho yefayile ngolwandiso lwe-.dat ichanekile okanye inolwazi olunxulumene nesixhobo sakho
Sawubona, emva kokuba wenze yonke into oyithethayo, le mpazamo iyaqhubeka ivela, enye ingcamango yeso siphumo. Ngaphambi kokubonga kakhulu
kodwa le nkqubo isebenza?
Ndiyabona i-arcgis i-9.2 kwaye ndandilandela isinyathelo sakho, ndandihlala ndiphuma umyalezo = uhlambalaza njengoko utshoyo, isisombululo esisodwa owaziyo, siyabonga